Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 10
Ity lahatsoratra manaraka ity, izay tsy ela taorian'ilay famoahana ny TENY amin'ny volana martsa, dia toa tsy dia toa ny mpamaky ho toy ny fanontaniana sy valiny taloha teo ambany RANO FOASA IZAO, fa noho ny fahalianana amin'ny taranja resahina sy ny fangatahana fangatahana nataon'ny mpanoratra. ny hamoahana ny fanoherana ao amin'ny TENY, FAHAFINY dia hamaly ny fanoherana araka izay angatahana azy, satria fantatra fa ny fanoherana dia amin'ny fitsipiky ny siansa kristiana, fa tsy an'ny olona manokana - Ed. NY TENY
New York, 29 martsa 1907.
Ho an'ny Tonian-dahatsoratra.
Andriamatoa: Ao amin'ny famoahana NY TENY ny volana martsa, dia mamaly sy mamaly fanontaniana maromaro momba ny siansa Christian ny "Namana". Ireo valiny ireo dia mampiseho fa ny mpanoratra dia nanamafy ny toerana sasany tsy mendrika amin'ny Science Science, izay raha toa ka notanterahina tamin'ny tsinontsinona azy ireo dia tsy mifanaraka amin'ny fanaon'ny vondrom-pivavahana rehetra. Ny fanontaniana voalohany: "Mety ve ny mampiasa saina fa tsy fomba ara-batana amin'ny fanasitranana ny aretina ara-batana?" voavaly ara-dalàna hoe "eny." Voalaza fa "misy ny fotoana izay hamarinina ny olona iray amin'ny fampiasana ny herin'ny eritreritra handresena ny aretina ara-batana, amin'izay dia hitenenantsika fa tsy diso izany. Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia tsy mety ny mampiasa saina fa tsy fomba ara-batana hanasitranana ny aretina.
Raha amin'ny alàlan'ny fampiasana ara-tsaina dia manondro ny fiasan'ny sain'olombelona iray ny mpanoratra iray, mba hanesorana ny aretina ara-batana, dia manaiky aho fa tsy mety izany amin'ny tranga rehetra. Ny mpahay siansa kristiana dia tsy mampiasa ny sain'olombelona amin'ny tranga rehetra hanesorana ny aretina ara-batana. Hita ao fa tsy mitovy ny siansa sy ny siansa ara-tsaina, izay tsy hitan'ny “Namana.”
Ny mpahay siansa kristiana dia mampiasa fomba ara-panahy amin'ny alàlan'ny vavaka ihany, hanasitranana aretina. Nilaza ny Apôstôly James hoe: "Ny fivavaky ny finoana dia hamonjy ny marary." Ny siansa kristiana dia mampianatra ny fomba hanaovana ny "vavaky ny finoana", ary, satria ny marary sitrana amin'ny alàlan'ny vavaka ara-tsiansa kristiana, dia porofo izany fa "ny vavaka finoana." Ny "Namana" dia tsy nampifangaro ny fikarakarana ny siansa Christian sy ny fitsaboana ara-tsaina. Ny siansa kristiana dia miankina tanteraka amin'Andriamanitra, amin'ny alàlan'ny vavaka, raha ny antsoina hoe siansa ara-tsaina, na izany dia miasa amin'ny alàlan'ny soso-kevitra ara-tsaina, hypnotism, na mesmerism, dia fiasan'ny sain'olombelona iray hafa amin'ny sain'olombelona hafa. Ny valin'ity raharaha farany ity dia miovaova sy manimba ary mendrika tanteraka ny fanamelohana natao tamin'ny fampiharana "A Friend". Tsy misy olona afaka manohitra ny fangatahana amin'Andriamanitra ary tsy misy afaka hiteny koa fa manimba ny fivavahana marina amin'ny hafa.
Ny fanontaniana iray koa dia hoe: "Moa ve Jesosy sy ny maro tamin'ireo olo-masina tsy nanasitrana aretina ara-batana tamin'ny fomba fisainana, ary raha izany dia diso ve?"
Tamin'ny famaliana ity fanontaniana ity hoe "Namana" dia nanaiky fa nanasitrana ny marary izy ireo, ary tsy ratsy ho azy ireo ny nanao izany. Fa hoy kosa izy: "Jesosy sy ny olona masina dia tsy nahazo vola hanasitranana azy ireo." Ary hoy koa izy: "Tsy toy ny an'i Jesosy sy ny mpianatr'i Jesosy na ireo olona masina no tokony handoa be isaky ny fitsidihana ny marary rehetra, manasitrana na tsy misy fanafody. ”
Ny zava-misy dia i Jesosy dia nanasitrana ny marary, ary nampianatra ny mpianany ny fomba hanaovana izany. Ireo mpianatra ireo dia nampianatra ny hafa, ary nandritra ny telonjato taona ny hery hanasitranana dia nazain'ny fiangonana kristiana tsy tapaka. Rehefa nandefa tarika ny mpianany niaraka tamin'ny didy hitory ny filazantsara sy hanasitrana ny marary i Jesoa dia nasainy tsy handray karama amin'ny fanompoana izy ireo. Rehefa nandefa azy ireo tamin'ny manaraka izy, dia nasainy nidina ny kitapom-bolany ary nanambara izy fa "ny mpiasa dia mendrika ny karamany." Io lahatsoratra io dia nekena nandritra ny roa arivo taona ho fahefana ho an'ny klerjy sy ny hafa manao asa kristianina mba hanaiky ny tambin-karama ho an'ny serivisy, ary tsy misy antony marim-pototra tokony hanaovana fampidiran-tena amin'ny raharaha mpahay siansa kristiana. Ny mpitondra fivavahana dia ampiasain'ny fiangonana hitory sy hivavaka, ary saika ny tranga rehetra dia karama raikitra. Ny samy mpahay siansa kristiana dia samy mitory ny filazantsara ary mivavaka, nefa tsy mahazo karama maharitra izy ireo. Ny andraikitr'izy ireo dia kely loatra amin'ny alàlan'ny fanadinoana, ary aloa an-tsitrapo ilay olona mitady fanampiana. Tsy misy fameperana ny momba izany ary amin'ny toe-javatra rehetra dia raharaha manokana eo amin'ny marary sy ny mpanao asa tsy ampanahirana azy ireo ny vahiny. Mba ho mpanao fampiharana ara-tsiansa kristiana, dia tsy maintsy miala amin'ny asa ara-dalàna ny olona ary manokana ny fotoany manontolo amin'ny asa. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy manana fitaovana farafahakeliny ilaina amin'ny filàna mahazatra izy ireo. Raha tsy nisy ny famatsiam-bola natao dia hita fa hosarahina tanteraka amin'ity asa ity ny mahantra. Io fanontaniana io dia nalamin'ny fiangonana Christian Science izay miorina tsara sy mahafa-po amin'ireo antoko ireo. Tsy misy fitarainana avy amin'ireo izay mitodika any amin'ny Science Science mba hanampiana azy ireo fa be loatra. Ny fitarainana toy izany dia matetika avy amin'ireo tsy manan-danja amin'ny Christian Science. Na izany na tsy izany dia tsy maintsy eken'izay rehetra maniry ny hitsabo izany lohahevitra izany, fa raha ara-dalàna ny mandoa mpitondra fivavahana hitory, ary hivavaka ho fanarenana ny marary, dia mitovy ny mandoa ny mpahay siansa kristiana ho an'ny toa izany tolotra.
Tena anao tokoa.
(Nosoniavina) VO STRICKLER.
Ny mpanontany dia nilaza fa "nampiasainay ny toeran'ny sasany tsy mendrika amin'ny siansa kristiana, izay raha tsy misy dikany ny heviny, dia tsy mahasoa amin'ny vondrom-pivavahana rehetra."
Ny hoe tsy mifanaraka amin'ny siansa kristiana ilay toerana dia marina, saingy tsy hitantsika fa tsy mifanaraka amin'ny fanaon'ny vondrom-pivavahana rehetra ireo toerana ireo. Ny siansa kristiana dia manamafy fa ny fampianarany dia tokana amin'ireo finoana maoderina, ary tsy isalasalana ny marina. Satria tsy mifanaraka amin'ny siansa kristiana ireo toerana ireo, tsy azo atao mihitsy izany fa ny tranobe rehetra dia mihatra amin'ny vondrom-pivavahana rehetra; fa raha ny antokom-pivavahana rehetra dia mandà ny zava-misy ary mampianatra lainga, dia tokony tsy ho voadidirantsika tsy ho voamariky ny momba azy ireo amin'ny foto-pampianarany sy ny fombany izy ireo, rehefa nitaky ny hanehoana ny fomba fijerintsika.
Raha niresaka momba ny fanontaniana voalohany sy valiny momba izany, izay niseho tao amin'ny Taratasy ny volana martsa, 1907, dia nilaza ny mpanoratra ny taratasy etsy ambony tao amin'ny fehintsoratra faharoa fa nanaiky izy fa “ny asan'ny olona iray eo amin'ny sain'olombelona hafa, hanaisotra ny vatana ratsy, tsy mety amin'ny tranga rehetra. ”
Amin'ny famakiana izany dia mipoitra ny fanontaniana, avy eo hoe inona no ilana fanoherana na ady hevitra bebe kokoa; Fa gaga isika amin'ilay fanambarana izay manao hoe: "Ny mpahay siansa kristiana dia tsy mampiasa ny sain'olombelona amin'ny lafiny rehetra hanesorana ny aretina ara-batana."
Raha marina fa ny sain'olombelona dia tsy ampiasain'ny siantifika kristianina amin'ny fiezahany sy ny fanaony mba hanesorana ny aretina ara-batana, dia esorina amin'ny fitsarana an'izao tontolo izao ilay raharaha, ary tsy avy eo noho ny fitsarana fitsarana. Noho izany, ny mpahay siansa kristiana dia tsy tokony hifantoka amin'ny heviny mahasoa momba ny fanaony, ary ivelan'ny tontolon'ny FAHAFATESANA MAZAVA io manandrana mandinika lohahevitra tsy momba ny sain'olombelona. Saingy toa tsy azo atao ny manao fanambarana toy izany. Raha voalaza fa ny saina avy amin'Andriamanitra (na karazana fiheverana hafa) izay manaisotra ny aretina ara-batana, fa tsy ny sain'olombelona, ​​dia ahoana no tsy ahatonga saina ny sain'olombelona? Raha miasa ny sain'Andriamnitra, na izay foto-kevitra lazain'ny "mpahay siansa", amin'ny fomba ahoana no atao rehefa tsy misy soso-kevitra na asa ny sain'ny olombelona? Nefa raha ny sain 'Andriamanitra no mahavita mamindra sy manala ny aretina ara-batana raha tsy eo ny asa na ny fampiasana ny sain'olombelona, ​​dia maninona no ilaina ny fitsabahan'ny mpahay siansa kristiana amin'ny fanesorana ny aretina ara-batana? Amin'ny lafiny iray ihany, ny hany vahaolana tokana dia ny tsy misy fomban'olombelona na olombelona miasa ao amin'ny fanesorana ny aretina ara-batana. Raha izany no izy, ahoana no maha-olombelona antsika, tsy misy ny fampiasana ny sain'olombelona, ​​hahalala na hahaliana ny aretina ara-batana, na fisainana masina, na ny fisainan'ny olombelona. Ilay mpanoratra ny taratasy dia namarana ny andalana faharoa tamin'ny nilazany hoe: "Ao anatin'izany ny tsy fitovian'ny tsiansa sy ny siansa ara-tsaina, izay tsy hitan'ny 'Aiza.' ''
Izahay dia miaiky fa tsy haintsika io fanavahana ny siansa kristiana sy ny siansa ara-tsaina io. Ny fanavahana ny siansa kristiana dia mankasitraka ny mpahay siansa ara-tsaina, ao anatin'izany, araka ny fanambarana ao amin'ilay taratasy, ny mpahay siansa ara-tsaina dia mbola mampiasa ny sain'olombelona, ​​fa ny mpahay siansa tsy manao izany.
Tamin'ny fanombohan'ny andalana fahatelo dia nanoratra ny mpanoratra ny taratasy hoe: "Ny mpahay siansa kristiana dia mampiasa fomba ara-panahy amin'ny alàlan'ny vavaka fotsiny mba hanasitranana aretina. Nilaza ny Apôstôly James hoe: 'Ny fivavaky ny finoana dia hamonjy ny marary.' ''
Ireo fanambarana ireo dia misafotofoto fa tsy mamaha ireo teny voalaza etsy ambony. Nipoitra ny fanontaniana voajanahary, inona no mampiavaka ny mpanoratra mba tsy hampisaraka ny heviny ara-panahy sy ny fomba ara-tsaina? Ho an'ny siansa ara-tsaina, ny mesmerista, ary ny psikolojia am-pahaizana momba ny saina, ny hetsika rehetra tsy inoana fa noho ny antony ara-batana dia mipetaka eo ambanin'ny loha iray ary antsoina hoe psychic, mental, na spiritual; tsara indrindra ara-panahy. Tsy fantatra mazava hoe ahoana ny fikasan'ilay mpanoratra hampiasa ny andian-teny hoe "fomba ara-panahy", afa-tsy ny fiheverany fa tsy vavaka ny vavaka. Fa raha ny vavaka tsy fihetsika mana-tsaina, na tsy misy ifandraisany amin'ny sain'olombelona, ​​inona no atao hoe vavaka? Iza ilay olona mivavaka? Inona no ivavahany ary iza no ivavahany ary inona?
Raha mivavaka dia mpahay siansa kristiana izay mivavaka, ahoana no ahafahany manomboka ny fivavahany tsy misy ny sain'olombelona? Fa raha tsy olombelona intsony izy ka lasa masina, dia tsy mila mivavaka izy. Raha mivavaka ny olona iray, dia raisinay fa ny vavaka nataony dia mitarika ho amin'ny hery avo noho ny azy, koa ny vavaka. Ary raha olombelona izy dia tsy maintsy mampiasa ny sainy hivavaka. Izay mivavaka dia tsy maintsy mivavaka zavatra. Ny tsy fahatomombanana dia ny hoe mivavaka momba ny aretina ara-batana izy ary hesorina ireo aretina ara-batana ireo. Raha ny fanafarana ny vavaka dia natao ho fanesorana ny aretina ara-batana, ny olona izay mivavaka dia tokony hampiasa ny maha-olombelona sy ny sainy hahalala ny aretina ara-batana ary hangataka ny hanafoanana izany ho tombontsoan'ny olona marary. Ny vavaka dia ny hafatra na fangatahana niantefa tamin'ilay olona, ​​hery na fitsipiky ny fanesorana ny aretina ara-batana. Voalaza fa mitodika any amin'Andriamanitra ny vavaka; fa izay te hiresaka hafatra mahomby na fangatahana amin'ny olona ambany, mitovy, na ambony, dia tsy maintsy mahalala ny fomba hitondrana hafatra na fangatahana toy izany amin'ny fomba hahazoana ilay fiafarana. Izay mivavaka na fangatahana dia tsy hangataka fahefana ambany noho ny tenany, satria tsy afaka manome ny fangatahany izany, ary tsy hangataka ny iray amin'izy ireo hanao izay azony atao. Ara-dalàna raha heverintsika fa ambony ilay olona tiany. Raha manam-pahefana ambony sy manan-tsaina amin'ny zavatra rehetra izy, dia ny fangatahana no tokony hanaiky ilay olona tsy ampahafantarina zavatra tsy fantany. Raha tsy fantany, dia tsy hendry daholo izy; fa raha fantany, dia fiheveran-tena ho tsy manambany sy tsy manam-pahefana amin'ny fangatahana ny fangatahana fangatahana manan-tsaina sy matanjaka rehetra hanao hetsika, satria ny fangatahana dia nilaza fa ny faharanitan-tsaina rehetra na natao tsinontsinoavina aza. hanatanteraka izay tokony ho nataony, na tsy nahalala fa tokony hatao. Raha mamela azy, amin'ny lafiny iray, fa ny manan-tsaina dia manan-tsaina sy mahery rehetra, kanefa tsy niahy ny tenany amin'ny raharahan'olombelona, ​​dia izay tokony hanelanelana na hivavaka amin'ny fanesorana ny aretina ara-batana. ary mampiasa ny sain'olombelona amin'ny fomba voalohany mba hampahafantarana ny aretina ara-batana amin'ny alalan'ny vavaka amin'Andriamanitra, ny faharanitan-tsaina. Ny fangatahana dia tsy maintsy atao amin'ny fanesorana ireo aretina, ary noho izany, ny saina dia ampiasaina amin'ny lafiny ara-batana. Ara-batana ny fiandohana, ny fizotran-tsaina dia tokony ho ara-tsaina (izay mety ho arosony) fa ara-batana kosa ny farany.
Raha ny vavaky ny finoana dia mipoitra ny fanontaniana: inona ny finoana? Ny olona rehetra amin'ny endrik'olombelona dia manana finoana, fa ny finoan'ny iray dia tsy ny an'ny hafa. Ny finoan'ny mpamosavy iray amin'ny vokatra mahomby amin'ny fanaony dia hafa noho ny finoan'ny mpahay siansa kristiana izay mety hahomby amin'ny fanaony, ary samy hafa izany amin'ny finoana an'i Newton, Keppler, Plato, na Kristy. Ny olona maimaika izay manana finoana jamba amin'ny andriamaniny dia mahazo valiny toy ny ataon'ireo izay voalaza etsy ambony izay manana finoana ihany koa. Ny antsoina hoe hetsika mahomby dia mety miankina amin'ny finoana jamba, amin'ny fiheveran-tena matoky, na amin'ny tena fahalalana. Ny vokatra ho araka ny finoana. Ny fitsipiky ny finoana dia mitovy ihany amin'ny tsirairay, fa ny finoana dia samy hafa amin'ny ambaratongam-pahaizana. Noho izany, raha ny filazan'ny mpahay siansa kristiana dia manasitrana amin'ny alàlan'ny fivavaky ny finoana, ny fanasitranana azo atao dia tsy maintsy arakaraka ny haavon'ny finoana amin'ny fampiasany saina. Mety ho tsy mety izany na tsy masina; nefa na izany na tsy izany, satria ny Apôstôly James dia nilaza fa "ny fivavaky ny finoana dia hamonjy ny marary," tsy manao izany. Ny zava-misy dia vavolombelony fa tsy ny Apostolin'i James.
Nanohy ny mpanoratra: "'Namana iray' dia tsy nampifangaro ny fikarakarana ny siansa Christian sy ny fikarakarana ara-tsaina."
Raha izao no zava-misy, ny "sakaiza" dia manaiky ny fahadisoany; kanefa tsy hitany ny fomba azon'ny mpahay siansa kristiana mianatra manao azy, ary “manaova ny vavaky ny finoana”, nefa tsy mampiasa ny sain'olombelona izy ireo. Ity fisalasalana ity dia toa tohanan'ny fanambarana manaraka izao: "Miankina tanteraka amin'Andriamanitra amin'ny siansa ny siansa ara-tsiansa kristiana, fa ny siansa ara-tsaina, raha miasa amin'ny alàlan'ny soso-kevitry ny saina, ny hypnotism na mesmerism, dia ny asan'ny olona iray amin'ny saina hafa. . Ny valin'ity raharaha farany ity dia miovaova sy manimba ary mifanaraka tanteraka amin'ny fanamelohana natao tamin'ireny fakan-tsary ireny amin'ny alàlan'ny 'A Friend.' ''
Na dia tsy miresaka momba ny mpahay siansa ara-tsaina aza isika eto ary milaza fa marina ireo voalaza etsy ambony ireo, dia mbola ao amin'ny bokin'izy ireo ny mpahay siansa ara-tsaina miaraka amin'ny mpahay siansa kristiana mba hiantehitra tanteraka amin'Andriamanitra, na amin'ny teny inona na fireneny fa Andriamanitra. Tsy manamaivana ny tsy fitovian'ny mpanoratra izany, noho ny antony efa nandroso. Ny fanasitranan'ireo mpahay siansa ara-tsaina dia ambaran'izy ireo fa mandaitra ary toy ny maro amin'ireo ampitan'ny mpahay siansa ho fanasitranana ireo mpahay siansa kristiana. Na inona na inona fitsipiky ny fanafody voakasik'izany, dia mahasitrana ireo karazany roa ireo "siantifika." Na izany aza, ny fanambaràn'ny mpanoratra ny taratasy etsy ambony ho an'ny siansa kristiana dia voatonona tanteraka, satria nampiharihary ny fanambarany ny mpahay siansa ara-tsaina izay tsy tiany. Hita izany amin'ny fampiasana sy ny tsy fisian'ny litera renivohitra ao amin'ny teny hoe "Science Science" sy ny "science science". Nandritra ny taratasy misy ireo teny hoe "siansa kristiana" na "mpahay siansa" dia natsangana amin'ny endriny, fa raha miresaka momba ny siansa ara-tsaina na ny mpahay siansa kosa dia tsy hita ny kapiteny. Ao amin'ny faran'ny fehintsoratra etsy ambony dia mamaky isika hoe: "Tsy misy olona afaka manohitra ny fangatahana amin'Andriamanitra ary tsy misy afaka milaza koa fa ny vavaka amin-kitsimpo ho an'ny hafa dia mety hanimba."
Ny "sakaiza" dia manohana an'io fanambarana io, fa tsy maintsy manampy an'io vavaka io ho an'ny hafa, ho fahatsoram-po sy mahasoa, tsy maintsy tia tena; ny vavaka na dia ho tombontsoan'ny hafa aza izany, raha misy valim-pananana samirery na ny fandraisana vola, dia tsy azo tsinontsinoavina ary tsy miala amin'ny fitiavan-tena, satria ny tombontsoan'ny tena manokana dia ho azo ankoatry ny tombontsoa azo avy amin'ny fahalalana amin'ny fanaovana asa fanompoana.
Tao amin'ny fehintsoratra manomboka hoe: "Ny zava-misy dia ny nanasitranan'i Jesosy ny marary, ary nampianatra ny mpianany ny fomba hatao toy izany koa" hoy i Correspondent izay manandrana manaporofo ny maha ara-dalàna ny asan'ny siansa kristiana amin'ny fanaovana karama: nandefa antokon'ireo mpianatra niaraka tamin'ny didy hitory ny filazantsara sy hanasitrana ny marary, dia nasainy tsy handray karama amin'ny fanompoana izy ireo. Rehefa nalefany izy ireo tamin'ny manaraka, dia nasainy nidina ny kitapom-bolany ary nanambara izy fa 'ny mpiasa dia mendrika ny karamany.' ''
Ny fanondroana voalohany ao amin'ny Testamenta Vaovao ampiharina amin'ny fanamafisan'ny Mpitolona antsika dia hita ao amin'ny Matt., Toko. x,, and. 7, 8, 9, 10: “Ary raha mandeha ianareo, dia mitoria hoe: Akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Sitrano ny marary, diovy ny boka, atsangano ny maty, avoahy ny demonia; efa raisinareo maimaimpoana ireo. Aza omena volamena, na volafotsy, na varahina, ao anaty poketranao; na kitapo ho amin'ny dianao, na akanjo roa, na kapa, na baisy; fa ny miasa dia mendrika ny haniny.
Tsy hitantsika na eo aza ny etsy ambony mba hanome toky ny mpahay siansa kristiana amin'ny fitakiana onitra. Raha ny marina, ny fanambarana hoe "efa azonareo maimaimpoana dia manome maimaimpoana", tohanana izany.
Ao amin'ny Mark, toko. vi., vs. 7-13, dia mahita hoe: “Ary niantso ny roa ambin'ny folo lahy Izy ka nanomboka nandefa azy tsiroaroa ary nanome azy fahefana hamely ny fanahy maloto. ary nandrara azy ireo izy fa tsy hitondra na inona na inona amin'ny diany, afa-tsy tehina ihany; tsy misy kitapo, tsy mofo, tsy misy vola ao anaty poketrany. Fa asio kapa ny fehin-kibo: ary aza miakanjo roa akanjo …… Dia lasa izy ireo ka nitory fa tokony hibebaka ny olona. Ary namoaka demonia maro izy, ary nanosotra diloilo ny marary maro ka nositraniny. ”
Tsy miady hevitra momba ny fanaon'ny mpahay siansa kristiana ireo etsy ambony ireo ary raha ny marina siantifika kristiana dia tsy afaka mihambo ny manaraka ny toromarika etsy ambony.
Ilay fanondroana manaraka hitantsika ao amin'ny Lioka, toko. ix., and. 1-6: "Ary niantso ny roa ambin'ny folo lahy Izy ka nomeny hery sy fahefana amin'ny demonia rehetra ary hahasitrana aretina. Ary nirahiny Izy hitory ny fanjakan'Andriamanitra sy hahasitrana ny marary. Ary hoy izy taminy: Aza mitondra zavatra ho amin'ny dianareo, na tehina, na kitapom-batsy, na mofo, na vola; ary tsy misy akanjo roa. Ary izay trano hidiranao, dia mitoera ao, dia hiala …… .. Ary dia nandeha izy ireo ka nitety ny tanàna nitory ny filazantsara sy nanasitrana hatraiza hatraiza. ” Tsy misy resaka momba ny onitra etsy ambony, ary ny torolalana mitovy amin'izany momba ny tsy fisian'ny karama, ny fahatsoran'ny akanjo. Ny voalaza etsy ambony dia tsy manohana ny Mpitolona antsika amin'ny filazany.
Ny fanondroana manaraka dia ao amin'ny Lioka, toko. x., vs. 1-9, izay voalaza hoe: "Rehefa afaka izany, ny Tompo nanendry fito-polo lahy hafa koa, ary naniraka azy tsiroaroa izy hialoha ny tanàna rehetra sy ny toerana rehetra izay alehany ...…. Aza mitondra kitapom-bola. na kitapom-batsy, na kiraro; ary aza miarahaba olona eny an-dàlana. Ary izay trano hidiranao, lazao aloha hoe: Fiadanana ho amin'ity trano ity. Ary raha ao ny zanaky ny fiadanana, dia hitoetra ao aminy ny fiadananareo: fa raha tsy izany, dia hiverina aminao izany. Ary mitoera ao amin'izany trano izany, mihinana sy misotro izay nomeny, fa ny mpiasa dia mendrika ny karamany. Aza mitety trano. Ary na aiza na aiza tanàna hidiranao ka horaisin'izy ireo ianareo, dia hano izay apetraka eo anoloanao; ary sitrano ny marary izay ao, ka lazao aminy hoe: Efa akaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra. ”
Ny voalaza etsy ambony dia misy ny teny notsongaina ao amin'ny taratasy "fa ny mpiasa dia mendrika ny karamany"; saingy io karama io dia tsotra "ny fihinanana sy fisotroana zavatra omeny." Azo antoka fa avy amin'io torolàlana io dia tsy afaka mitaky ny fahazoan-dàlana afa-tsy ny fisakafoanana sy ny fisotroana tsotra azy ny tranon'ny marary. Ny fanondroana rehetra hatreto dia nanohitra ny fahazoana onitra hafa ankoatra ny sakafo sy ny trano fialofana izay omen'ny mpanasitrana azy. Ary araky ny aseho amin'ny MOMENTS miaraka amin'ny RANO, ny voajanahary dia manome foana izany ho an'ny tena mpanasitrana.
Anjarantsika ny miresaka farany, dia i Lioka. toko. xxii., and. 35-37: “Ary hoy izy taminy: Raha nirahiko tsy nitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapa ianao, moa misy zavatra nahory anao va? Ary hoy ireo: Tsy misy. Dia hoy izy taminy: Fa ankehitriny, izay manana kitapom-bola, dia aoka izy haka azy sy ny kitapony koa; Ary izay tsy manana sabatra hamidy ny lambany ary hividy. Fa lazaiko aminareo fa ity voasoratra ity dia tsy maintsy tanterahina amiko. Ary natao ho isan'ireo mpanota izy, satria tapitra ny zavatra momba ahy. "
Ny dikany ao amin'ireo andalan-teny voalaza ireo dia toa tsy hiaraka amin'ny mpianatra intsony i Jesosy, ary tsy maintsy hiady amin'ny fomba tiany izy ireo; fa tsy misy dikany firy ho fanonerana ny aretina. Raha ny marina, ny torolàlana hitondra ny kitapom-batany sy ny kitapony miaraka aminy dia manondro ny mifanohitra amin'izany ny onitra: fa tsy maintsy mandoa ny vola naloany izy ireo. Raha ny marina dia ny fanoherana ny fangatahana sy ny fanaon'ny siansa kristiana dia manohitra azy ireo. Ny mpitsikitsainay dia nandratra ny raharaha tamin'ny alàlan'ny fandrosoany ho amin'izany. Ny torolalana nomen'i Jesosy dia tsy manaraka ao amin'ny fanahy na amin'ny taratasy. Ny mpahay siansa kristiana dia tsy kristiana amin'ny fampianarany na tsy mpianatr'i Jesosy; mpianatry ny Ramatoa Eddy sy ireo mpanolo-tsaina ny fotopampianarany izy ireo, ary tsy manan-jo hampandroso ny fampianaran'i Jesosy na ny fampianaran'i Ramatoa Eddy na ho fanohanana ny fangatahan'izy ireo sy ny fanaony.
Nanohy ny filazan-gazety: “Nekena nandritra ny roa arivo taona io andininy io, noho ny fahefana ampy ho an'ny mpitondra fivavahana sy ny hafa manao asa kristianina, hanaiky valisoa ho an'ny serivisy, ary tsy misy antony marim-pototra hanomezana azy manokana. an'ny mpahay siansa kristiana. ”
Tsy marina amin'ny mpahay siansa kristiana ny manaraka fanao sasany amin'ny mpitondra fivavahana ao amin'ny fiangonana Kristiana, ary miala tsiny amin'ny tenany ny fanekena onitra satria ny mpitondra fivavahana no manao izany, ary amin'ny fotoana iray tsy ankatoaviny tanteraka ny fiangonana kristiana ao amin'ny foto-pinoany lehibe sy ny manandrana mamelona ny Kristianisma amin'ny siansa Christian. Ny fiangonana kristiana dia mandinika fanao sasany ary mampianatra fotopampianarana sasany, izay eken'ny olona an-jatony ny Kristianisma Anarana, ary ny mpitarika ny fiangonana kristiana amin'ny fihetsika rehetra manohitra ny fampianaran'i Jesosy, na dia mitazona ny foto-pinoana aza izy ireo; saingy tsy misy ifandraisany amin'ny ratsy izany, raha tsy mety, raha ny mpahay siansa kristiana hanaiky vola hanesorana ny aretina ara-batana amin'ny alàlan'ny fisainana ara-tsaina, na, raha toa ny fehezanteny, amin'ny fomba ara-panahy, satria raha Andriamanitra na ara-panahy dia misy fiantraikany amin'ny manasitrana, dia avy amin'Andriamanitra ny fanasitranana, ary fanomezana avy amin'ny fanahy izany, ary ny mpahay siansa kristiana dia tsy manan-jo handray vola ara-batana izay tsy nahatratrarana ny fanafody, ary mahazo vola kosa izy noho ny fihatsarambelatsihy.
Nanohy ny mpanoratra: “Ny mpitondra fivavahana dia ampiasain'ny fiangonana hitory sy hivavaka, ary saika ny toe-javatra rehetra dia karama maharitra. Ny samy mpahay siansa Christian dia samy mitory ny filazantsara ary mivavaka, nefa tsy mahazo karama maharitra izy ireo. ”
Tsy isalasalana fa marina, saingy, lehilahy mahay orinasa, manangona karama amin'ny fotoanany sy ny asany izy ireo. Manohy ny fanontaniana momba ny onitra, hoy ny mpanoratra: "Ny andraikitr'izy ireo dia kely loatra ka tsy manjavozavo ary omena an-tsitrapo ilay olona mitady fanampiana."
Fa ny fiampangana dia kely ary tsy misy dikany ary karama an-tsitrapo no mety ho toy izany amin'ny lafiny iray fa mety hamoy ny kitapom-bolany ny olona rehefa mieritreritra izy fa manana tsaratsara kokoa, na ny lohahevitra hypnotised dia hanao an-tsitrapo ny fananany ary hanome ny volany ho azy hipnotisma. Ny filazana fa ny mpahay siansa kristiana dia tsy manana karama raikitra ary ny fiampangana izay zara raha misy tsy manara-penitra dia tena mahatsikaiky tokoa ary tsy maintsy mitaky ny fahalalahan'ny mpamaky. Ny fidiram-bolan'ny sasany sy ny mpamaky ao amin'ny fiangonana siantifika kristiana dia "kely loatra ka tsy dia misy dikany" raha tsy heverina fa mety ny fidiram-bolan'ny mpahay siansa kristiana amin'ny ho avy.
Miresaka momba ny fanambaràn'ny Jeneralintsika izay nilaza fa "kely ny andraikitr'izy ireo fa saika tsy misy dikany ny azy", ary "ity fanontaniana ity dia nalamin'ny Fiangonana Science Science amin'ny lafiny iray izay mety sy manome fahafaham-po ny antoko. Tsy misy fitarainana avy amin'ireo mitodika any amin'ny Science Science mba hanampy azy ireo fa be loatra. ”
Izahay dia mitantara izao manaraka izao amin'ireo tranga maro izay niantsoana anay. Ny injeniera iray tao amin'ny lalamby iray teo an-toerana dia nanana fitiavana tebiteby tamin'ny tanany havanana izay nandrahona ny tsy hahavita azy hiasa. Fikarohana dokotera maro no notadiavina. Narahin'ny dokotera ny fanarahana azy ireo isaky ny azo atao, ary ny mpiara-miasa aminy dia nanome fitaovana ho azy hamakivaky ny ranomasina araka ny nanoroana azy. Tsy nitondra tombony anefa izany. Avy eo izy dia nanandrana mpahay siansa kristiana iray ary somary maivamaivana kokoa. Izany dia nahatonga azy hanatevin-daharana ny kolotsaina ary lasa mpino tsy marim-pototra izy, ary niezaka namadika ny namany tahaka ny mihaino azy. Nefa tsy sitrana izy. Indray andro dia nanontaniana azy izy, maninona, raha efa nanampy be dia be izy, dia tsy afaka nanasitrana azy ny mpitsabo siansa. Ny valinteniny dia hoe: "Tsy afaka manome azy hahasitrana ahy aho." Rehefa nanontaniana ny fanazavana dia nilaza izy fa ny vola rehetra azony nalamina miaraka hanamaivanana toy ny taloha ihany, ary tsy afaka ny hahazo vola ampy hahasitrana tanteraka. Nohazavainy bebe kokoa fa ny mpahay siansa kristiana dia tsy afaka manome ny fotoanany hanasitranana tanteraka raha tsy hoe nandoa vola izy; fa ny mpahay siansa kristiana dia tsy maintsy miaina, ary rehefa niantehitra tamin'ny karama azony izy, dia nahasitrana ireo izay afaka nandoa ny sitrana fotsiny. Ity vazaha ara-tsiansa kristiana ity dia toa mieritreritra fa tsy dia sitrana raha tsy manam-bola hanasitranana azy.
Manohy ny lohahevitra momba ny fahazoana vola amin'ny marary ho an'ny tombontsoa omena, dia hoy ny Correspondent: "Tsy misy fanerena azy, ary amin'ny lafiny inona dia olana manokana eo amin'ny marary sy ny mpanao izany, izay tsy atahoran'ireto farany ny vahiny."
Raha ny fahitana dia tsy misy fanerena raha toa ka mandray karama na manome izany. Ity dia fanontaniana izay avela ho tsinontsinona, saingy ny Mpitolona dia tsy afaka manala mora an'ity raharaha ity amin'ny ampahany farany amin'ny fehezanteny. Ny hoe ny vahiny dia tsy miraharaha izay raharaha momba ny olombelona sy ny olona; fa tsy mihatra amin'ny fampiharana ny siansa kristiana. Miezaka mampahafantatra ireo fotopampianarany ny siansa kristiana ary ny fampiharana azy dia tsy resaka tombotsoa manokana sy manokana ho an'ny olona sy ny olona ihany. Ny fanaon'ny siansa kristiana dia resaka marim-bahoaka. Misy fiantraikany amin'ny tombontsoan'ny fiaraha-monina, ny firenena ary ny an'izao tontolo izao. Mitokona amin'ny fihanaky ny olombelona izy ireo; mandà ny zava-misy izy ireo, miampanga lainga, manafika ny fahatsarana ara-moraly ny tsara na diso, misy fiantraikany amin'ny fahadiovana sy ny fahamarinan'ny saina; izy ireo dia milaza fa tsy manam-pahalalana sy tsy manam-pahalalana ho an'ny mpanorina ny fivavahan'izy ireo, vehivavy iray nihanaka ny ankamaroan'ny fahalemen'ny toetrany; izy ireo dia hanao sy hampihena ny tontolo ara-panahy ho andevon'ity tany ara-batana ity; Ny fivavahan'izy ireo no miseho ho azy, amin'ny tanjony voalohany, dia ny fanasitranana ny aretina, ary ny haitraitra amin'ny vatana ara-batana ihany. Ny fiangonan'ny mpahay siansa kristiana dia miorina ary miorina amin'ny fitsaboana amin'ny aretina ara-batana, ary misy maso maso amin'ny toe-batana. Ny finoana manontolo ny siansa kristiana dia mitodika amin'ny fahombiazana an'izao tontolo izao sy ny fiainana amin'ny fiainana ara-batana; na dia mihambo ho ara-panahy hatrany am-boalohany sy amin'ny tanjona ary amin'ny fampiharana izany. Ny fahombiazan'ny fiainana sy ny fahasalaman'ny vatan'ny vatana dia mety sy mety; fa izay rehetra naorin'ny fiangonana siansa kristiana dia miala amin'ny fanompoana ny fitsipik'i Kristy sy ilay tena Andriamanitra. Miaraka amin'ny mpahay siansa kristianina, rehefa mitsara ny fitakiany dia Andriamanitra dia misy indrindra fa ny famaliana ny vavak'izy ireo. Misy i Kristy saingy ho endrika asongadiny hanaporofoana fa ny mpahay siansa kristiana dia voafetra amin'ny fanaony, ary ho solon'Andriamanitra na Kristy ary ny fivavahany, Ramatoa Eddy dia avy amin'ny alalàn'ny voninahitra sy narahin'ny sezam-boninahitra sy narahin'ny izy ireo ho amin'ny tenim-pirenena, ny didiny dia tsy mety ary tsy azo alaina, izay tsy misy fanavaozana na fanovana.
Ireo fehezan-teny telo manaraka ao amin'ilay taratasy dia voavaly tamin'ny MOMENTS WITH FRIENDS. Ity fehezan-teny manaraka ity kosa dia mampiseho endrika hafa, na dia eo aza ny resaka momba ny onitra. "Ity fanontaniana ity dia nalamin'ny fiangonana Christian Science tamin'ny fotony izay tena ilaina sy manome fahafaham-po an'ireo antoko ireo."
Izany fotsiny; saingy io ihany no lazain'ny vondron'olona iray mpanao politika ratsy fanahy na lazaina fa ara-pivavahana. Na dia azo dinihina tsara sy mahafa-po amin'ny mpahay siansa kristiana aza izany, tsy tokony ho an'ny besinimaro izany mihoatra noho izany raha toa ka tokony havela hanao izay mety ho toerany ny voafonja iray fialokalofana mba hanao izay heveriny fa mety raha tsy izany. .
Ny Mpanoratra ny taratasy dia namarana izany tamin'ny filazana hoe: “Na izany na tsy izany dia tokony eken'ny rehetra izay te-hikarakara an'io lohahevitra io amin'ny fomba tsy miangatra, fa raha mety ny mandoa mpitondra fivavahana hitory ary hivavaka ho fanasitranana ny marary, dia mitovy zo ny mandoa siantifika kristiana amin'ny fanompoana toy izany. ”
Isika indray dia manintona ny saina momba ny tsy rariny raha manandrana manameloka, raha misy ny fanamelohana, amin'ny mpitondra fivavahana ao amin'ny fiangonana kristiana, ary miala tsiny amin'ny asan'ny mpahay siansa kristiana amin'ny alàlan'ny fanaon'ny mpitondra fivavahana kristiana. Tsy fanao any amin'ny fiangonana kristiana ny fahazoan'ny mpitondra fivavahana ny tambin-karama raha ny mivavaka ho an'ny marary. Izy, araka ny nomarihin'ny mpahay siansa kristiana azy dia mahazo karama maharitra amin'ny fitoriana ny filazantsara ho minisitry ny fiangonana fa tsy mpanasitrana azy. Fa ny fanontaniana tafiditra dia tsy hoe mety ve sa tsy mety ny mandoa mpitondra fivavahana hitory sy hivavaka hangataka ny fanarenana ny marary, ary noho izany dia miala tsiny amin'ny mpahay siansa kristiana ny hanaovana fanompoana mitovy.
Ny fikasana hanary ny tohan-kevitra amin'ny mpitondra fivavahana kristiana dia manalefaka ny toeran'ilay mpahay siansa kristiana. Ny fanontaniana dia izao: Mety sa tsy mety ny maka vola hahazoana ny fanomezan'ny fanahy? Raha diso izany dia na ny mpitondra fivavahana no manao izany na tsia, tsy misy fialana amin'ny fandainga lainga na fanambaràn'ny mpahay siansa kristiana.
Raha ny fototry ny siansa kristiana, dia toa tsy afaka nisy intsony ny vola rehetra tamin'ny fampianarana fotopampianarana siansa kristiana na tamin'ny fanasitranana, na ny fanandramana fanasitranana, noho ny aretina ara-batana. Ny mpanam-bola amin'ny siansa kristiana dia mety tsy hanaja azy intsony, na tsy hampiasa an'izany. Raha ny amin'ireo mpino amin'ny siansa kristiana, raha toa ka nofoanana ny fanasitranana ireo aretina ara-batana dia ho simba ny fototry ny finoany ireo fotopampianarana siansa kristiana ary hanjavona miaraka amin'ny fototra ara-batana ny "ara-panahin'izy ireo".